NGAWAPHI AMAXESHA AMADODA AMISA UKUSEBENZA NGOKWESONDO? - INDLELA YOKUPHILA
Ngawaphi amaXesha aMadoda aMisa ukuSebenza ngokwesondo?
Ukwabelana ngesondo akufani nesihloko njengoko bekuhlala kunjalo. Ngapha koko, abantu abaninzi baya benomdla ngakumbi malunga nezinto ezahlukeneyo zesondo. Njengoko abantu besiba nengqondo evulekileyo ngakumbi kuzo zonke izihloko ezinxulumene nokwabelana ngesondo, imibuzo embalwa eqhelekileyo iyaziveza. Omnye wemibuzo eqhele ukwenziwa ngamadoda nabafazi abaninzi malunga nokwabelana ngesondo kukuba yeyiphi iminyaka amadoda ayeka ngayo ukuba neentlobano zesini?
Ngaphambili bekukholelwa ikakhulu ukuba amadoda ayekile ukuba neentlobano zesini emva kokungena kwiminyaka yabo yobudala. Nangona kunjalo, uphononongo lwakutshanje luyichithile le ntsomi ithandwayo njengoko kuye kwafakazelwa ukuba amadoda ahlala esabelana ngesondo kubo bonke ubomi babo. Nangona kunjalo, kukho izinto ezimbalwa ezifanelekileyo ezichaphazela xa indoda iyeka ukwabelana ngesondo.
Ukwabelana ngesondo ngumsebenzi obalulekileyo kubo bonke abantu abadala njengoko zininzi izibonelelo zempilo ezinxulunyaniswa nokwenza isenzo rhoqo. Kuyavunywa, ukuqhuba kwesondo komntu kuyatshintsha njengoko bekhula, kwaye nje ukuba indoda idlule kwiminyaka engamashumi amahlanu, banokuqaphela utshintsho oluthile oluphawulekileyo.
Ukuba unomdla ekufumaneni ukuba uphando luthini malunga neminyaka yokuba amadoda ayeke ukuba neentlobano zesini kunye nezinye izihloko ezinxulumene noko, qhubeka ufunda.
Abadala baSebenzelana ngesondo kweliphi ixesha?
Isebe lezeMpilo laseVirginia
Phambi kokuba sijonge xa ​​indoda iyeka ukwabelana ngesondo, kufuneka sazi ukuba amadoda aqala nini ukulala ngesondo. Ngokophando lwakutsha nje, amadoda nabafazi banakho ukuthatha inxaxheba kwimisebenzi yesondo kunye neempendulo ngexesha lokufikisa. Uphononongo luka-2010 lubonakalise ukuba abantu abaninzi baseMelika bayazibandakanya kwisini sangasese nangomlomo ngexesha lokufika kwabo kwi-20s yabo yokuqala.
Izifundo zonyango zibonise ukuba uninzi lwamadoda lufumana ukuphuma kwawo okokuqala phakathi kweminyaka ye-12 kunye ne-14, kunye nabesilisa abancinci abakwaziyo ukufikelela kulwakhiwo ngokukhawuleza kunamadoda amadala. Nangona kunjalo akusoloko kunjalo. Uvavanyo olwenziwe nguPhando lwezeMpilo kuZwelonke kunye neNtlalo yoBomi boLuntu lufumanise ukuba malunga neepesenti ezingama-31 zamadoda aphakathi kwe-18 ukuya kuma-59 amava okuziphatha gwenxa ngokwesondo. Ezi zibalo zichaphazela ubudala apho ipesenteji yamadoda iqala khona ukuzibandakanya kwimicimbi yesondo.
Ngapha koko, ingxelo ngu Isebe lezeMpilo laseVirginia eMelika ifumanise ukuba i-avareji yobudala bokuqalisa ngokwesondo ukuba ibe li-15.6 leminyaka ubudala. Abaphandi bafundile ukuba amadoda aqaliswa ngokwesondo kwangaphambi kwexesha kunabafazi. I-22% yamadoda abandakanyekayo kuphononongo afumana ukuqaliswa ngokwesondo kwi-avareji phakathi kweminyaka eyi-10 ukuya kwi-13 ubudala. Ngokwahlukileyo, i-16% yabasetyhini bafumana amava abo okuqala ezesondo phakathi kwe-10 kunye ne-13 yeminyaka ubudala.
Ngabuphi ubudala Ngaba amadoda ayayeka ukuba neentlobano zesini?
Ii-harley davidson tattoos ezineflegi yaseMelika
Uninzi lwabantu ngaphambili lwalukholelwa ukuba amadoda ayeka ukuba neentlobano zesini nje ukuba bangene kwiminyaka yabo yobudala. Isifundo esinomdla esivela kwi IYunivesithi yaseChicago Medical Centre sele eyichasile lethiyori. Emva kokufunda iqela lamadoda nabasetyhini, bafumanisa ukuba amadoda nabafazi babelana ngesondo ixesha elide kunokuba bebecinga njalo ngaphambili.
Into enomdla kukuba, amadoda anethuba elifutshane lokuphila kunabafazi, kodwa anethemba lokuphila ixesha elide. Iziphumo ezivela kolu phando zichaze ukuba kwiminyaka ye-55, amadoda kufuneka abe namava ongezelelweyo kwiminyaka eli-15 yesenzo sezesondo ukuba akukho zinto zixhomekeke kwezempilo. Xa kuthelekiswa, abasetyhini abaneminyaka engama-55 ubudala kufuneka balindele kuphela ukufumana iminyaka eli-11 okanye ngaphantsi kwesenzo sokwabelana ngesondo.
Olu phononongo luye lwabonisa ukuba amadoda akwimpilo entle anokongeza iminyaka emihlanu kuye esixhenxe ngaphezulu kweminyaka eli-15 elindelekileyo ebomini. Ngokuchasene noko, abasetyhini abasempilweni entle banokongeza iminyaka emithathu ukuya kwemihlanu ngaphezulu kweminyaka eli-11 kulindeleke ukuba baphile ngokwesondo emva kokufikelela kwiminyaka engama-55 ubudala.
Ekugqibeleni oku kuthetha ukuba amadoda anokujonga ukuba neentlobano zesini kude kube yiminyaka eyi-77 ukuba basempilweni, ngelixa abasetyhini banokulindela ukuba babe neentlobano zesini kude kube yiminyaka engama-72. babonakalisile ukuba uninzi lwamadoda luyaqhubeka ukukhokela ubomi besondo obuphilileyo buye kwi-70s yabo. Ngapha koko, oku akubekwanga ematyeni njengoko indoda nomfazi ngamnye bahlukile. Abanye banokuqhubeka nobomi besondo obuphilileyo ukuya kwiminyaka yabo yobudala.
Yeyiphi iminyaka eyiDala yokuba amadoda aSebenze ngokwesondo?
Iminyaka, oososayensi kunye nabaphandi bezonyango bazamile ukumisela iminyaka efanelekileyo yokuba amadoda abe neentlobano zesini. Emva kweminyaka ngaphandle kwempendulo, uphononongo luveze ukuba elona xesha lifanelekileyo lamadoda ukuba abe neentlobano zesini li-18-ubudala. Ngokophando, kukho izizathu zokuba kutheni i-18 ifunyenwe ineminyaka efanelekileyo.
Ngokusisiseko, izizathu eziphambili zijikeleza ukukhula kwengqondo kunye nokukhula komzimba. Abo babelana ngesondo eneminyaka engaphantsi kwe-18 bajongana nemicimbi engokwasemzimbeni nangokwengqondo kunabo babelinde de babaneminyaka eli-18 ubudala.
Bona ngakumbi malunga - Ukunyuka kwamanyala kunye nefuthe lawo emadodeni
Njani ukuqhuba ngesondo ukuTshintsha kwaMadoda njengoko bekhula
Okokuqala kubalulekile ukwazi ukuba yintoni ukuqhuba ngesondo ngaphambi kokuba sihlalutye ukuba itshintsha njani njengamadoda amadala. Ngokusisiseko, xa umntu ethetha ngesondo labo, babhekisa kwi-libido yabo. Umntu unakho ukuqhuba ngesondo esisezantsi okanye esiphakamileyo ngokusekwe kwi-libido yabo. Ukuqhuba komntu ngesondo kuhlala kuxhomekeke kumnqweno wakhe wokuba neentlobano zesini.
ikrele kunye ne-rose intsingiselo yentsingiselo
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba iimeko zengqondo nezonyango zihlala zichaphazela ukuqhuba komntu ngesondo.Ngoku ekubeni sisazi ukuba yintoni ukuqhuba ngesondo, sinokujonga ukuba itshintsha njani njengamadoda amadala. Apha ngezantsi uyakufumana iminyaka embalwa eyimbalasane xa i-sex drive yendoda itshintsha.
Amadoda kwi-20s yawo
Uninzi lwamadoda ludla ngokuqhuba ngesondo oluphezulu kwi-20s yabo ngenxa yamanqanaba aphezulu e-testosterone kwaye ngenxa yokuba bavuswa ngokukhawuleza. Ngexesha labo lama-20, amadoda amaninzi abelana ngesondo ngakumbi kunakwiminyaka yabo yokufikisa. Oku ikakhulu kubangelwa zizinto ezinje ngokutshintsha indlela yokuphila, utshintsho lomzimba, kunye notshintsho ngokwasengqondweni.
Nangona uninzi lwamadoda luqhuba ngesondo oluphezulu kwi-20s yabo, ukuya kuthi ga kwi-8% yamadoda aneengxaki zokungasebenzi kakuhle ngexesha le-20s. Le meko inokudibaniswa neengxaki zempilo yengqondo kunye nempilo.
Amadoda kwi-30s yawo nakwi-40 yokuqala
Kwiminyaka yabo yama-30 ukuya kwengama-40, amadoda amaninzi ayaqhubeka nokuqhuba ngesondo okunempilo. Nangona kunjalo, ukusuka kwiminyaka engama-35 ubudala, amanqanaba e testosterone endoda aqala ukwehla kancinci. Ngokomndilili nyaka ngamnye emva kwe-35 ye-testosterone yendoda incipha nge-1%.
Iitatto zamagama kuyilo lweengalo
Ukuthetha ngokwenzululwazi, oku kunokuchaphazela kancinci ukuqhuba kwendoda ngokwesini kwaye kunokubangela ukuba i-libido kunye neemfuno zesondo zinciphise. Ukongeza, ngaphandle kwenyani yokuba iihomoni ze-testosterone zomntu ziqala ukwehla, amadoda amaninzi ajongene noxinzelelo lwendlela yokuphila kunye nokuzibophelela emsebenzini okunokubangela ukwehla kwe-libido.
Amadoda kwi-50 yabo nangaphezulu
Njengoko sisazi ngoku, amadoda anokuqhubeka nokuba nobomi besondo obuphilileyo ukuya kwi-50s yabo ukuba basempilweni entle. Nangona kunjalo, amadoda amaninzi aneengxaki zokuthamba okanye ukungasebenzi kakuhle emzimbeni emva kokufikelela kwiminyaka engama-50 ubudala. Ngokwesiqhelo, ayisiyiyo yokuba indoda ikhula ukuba ifumane le meko kodwa ngenxa yeengxaki zempilo.
Akumangalisi ukuba, njengokuba umntu esiya esiba mdala, esengozini yokuba butyebile okanye abe neswekile, isifo sentliziyo, kunye necholesterol ephezulu. Ezi meko zibanegalelo elibonakalayo ekubeni okanye hayi indoda iya kufumana ukungasebenzi kakuhle kwe-erectile.
Enye inkxalabo echaphazela indlela idrive yesondo etshintsha ngayo njengoko igqitha kwiminyaka engama-50 kukuchama ngaphambi kwexesha. A Uphononongo lubonise ukuba i-31% yothusayo Amadoda akwi-50s yawo kunye ne-30% kwi-60s yabo yokuqala abahlupheka ngenxa ye-ejaculations ngaphambi kwexesha. Ngapha koko, uphononongo lufumanise ukuba i-28% yamadoda aphakathi kweminyaka eyi-65 kunye ne-70 kunye ne-22% yamadoda phakathi kwe-75 kunye ne-85 ikwanamava okuchaphazeleka ngaphambi kwexesha.
Izibonelelo zokuGcina uBomi obuSempilweni beSondo
Zininzi izibonelelo ezinxulumene nokugcina impilo yesondo esempilweni. Apha ngezantsi sidwelise ezimbalwa ze uninzi lwezibonelelo eziqhelekileyo Amadoda anokujonga phambili ukuba bayaqhubeka nokwabelana ngesondo kubo bonke ubomi babo.
Isistim somzimba esomeleleyo: Ngokweengcali ezininzi zezempilo ezithatha inxaxheba kwimisebenzi yesondo rhoqo inyusa amajoni omzimba omntu. Ngokusisiseko, abo banobomi obuxakekileyo besini banamajoni omzimba omeleleyo kunalawo angafane athathe inxaxheba kwimisebenzi yesondo. Kungenxa yokuba kuqinisekisiwe ukuba abo babelana ngesondo banamanqanaba aphezulu ee-antibodies ezithile ezikhuselayo kwiintsholongwane nakwiintsholongwane.
Ukunciphisa umngcipheko wokuba nesifo sentliziyo: Izifundo ezininzi zibonise ukuba isini silungile entliziyweni yomntu. Ukuthatha inxaxheba kwimisebenzi yesondo rhoqo kuya kuqinisekisa ukuba unyusa izinga lokubetha kwentliziyo yakho kwaye ugcine amanqanaba e testosterone kunye ne-estrogen eseleyo. Ukuba enye yezi hormone iphantsi kakhulu, indoda inokufumana inkxalabo yezempilo efana nesifo sentliziyo kunye ne-osteoporosis. Ukongeza, uphononongo lufumanise ukuba amadoda abelana ngesondo ubuncinci kabini ngeveki benesiqingatha sokufa sisifo sentliziyo. Ngokuchasene noko, oogxa babo ababengafane bathathe inxaxheba kwimisebenzi yesondo babenethuba lokuphuhlisa isifo sentliziyo.
Ngaba unokuwanciphisa amathuba endoda yokuba nomhlaza wedlala lobudoda: Uphononongo lwamva nje lupapashiwe kwindawo ehlonitshwayo Ijenali yoMbutho Wezonyango waseMelika Kuyacaca ukuba amadoda afumana ubuncinci amaxesha angama-21 ngenyanga nganye ubuncinci kunamathuba okuba nomhlaza webele. Ukunciphisa amathuba okuba nomhlaza wedlala lobudoda, uphononongo lufumanise ukuba akukho ndlela ithile ekufuneka umntu ayichithe. Ukuphulula amaphambili kunye nokwabelana ngesondo kunye neqabane kwamkelekile.
Inceda ngolawulo lweentlungu: Isenokungakholakali kodwa ukuba neentlobano zesini kuyayinciphisa intlungu. Xa indoda ine-orgasm, ikhupha i-hormone enceda ukuphakamisa umqobo weentlungu zomntu. Ukongeza, nokuba umntu akakwazi ukwenza i-orgasm, ukukhuthaza yedwa ngamanye amaxesha kunokubangela ukukhutshwa kwehomoni. Ke, kwixesha elizayo xa unentloko ebuhlungu okanye ufumana iintlungu ze-arthritic, cinga ngokuzibandakanya kwimicimbi yesondo.
Ngoku Uyayazi iminyaka yokuba amadoda ayeke ukuba neentlobano zesini
Into enomdla kukuba, uninzi lwamadoda luqaliswa ngokwesondo kwinqanaba elincinci nelingasoloko lilungile kubo ngokwasengqondweni. Ngokufanelekileyo, amadoda kufuneka okungenani abe neminyaka eli-18 ubudala ngaphambi kokuba aqale ukubandakanyeka kwizenzo zesondo. Nangona amadoda eqala uhambo lwabo ngokwesondo besebancinci, kuyacaca ukuba akukho budala bokwenyani bokuba amadoda ayeke ukuba neentlobano zesini.
Ngokophando lwamva nje, uninzi lwamadoda lunokukhangela phambili ekuboneni ubomi besondo obuphilileyo buye kwi-70s yabo okoko nje besempilweni. Ngaphaya koko, ngoku siyazi ukuba amadoda ahamba ngeendlela ezahlukeneyo zokuqhuba ngesondo njengoko bekhula. Siyayazi ngoku into yokuba ukuba amadoda ahlala ethatha inxaxheba kwimisebenzi yesondo, bafumana izibonelelo ezininzi zempilo. Ekugqibeleni, xa usabelana ngesondo ngakumbi, kokukhona uya kuhlala ixesha elide kwaye wonwabe.
Bona ngakumbi malunga - Sibuza i-Old Age Umbuzo: Ngaba ubungakanani bento?
umvambo opheleleyo wesandla sendoda
Isikolo esidala esineenwele ezibuya ngasemva
Berserk uphawu lwedini lomvambo
izihlangu lophawu eziphezulu zamadoda
Umthi wobomi be-tattoo yengalo
Iingcamango ezincinci zendlela yokungena kwifoyer
Isinxibo seHalloween esilula kubafana